Nke a bụ agadi-akwụkwọ European nghọta na elu uko ụlọ, brasserie oyiyi akwa, enyo gosipụtara na mgbidi, na ndokwa ejiji ejiji.
A surf-sitere n'ike mmụọ nsọ ahịa kọfị na Paris bụ ihe ị na-mgbe ihe Aussie na Frenchie amalite a ahịa kọfị, n’otu n’ime obodo cafe ndị ama ama n’obodo-ukwu nke ụjọ juru n’ụwa niile. Ọ na-eme ya elu na ndepụta kasị mma anyị kọfị ụlọ ahịa na Europe.
Ekele iche dị ka Mok, Brussels na-ịkpata ya ntụpọ na nke kacha mma kọfị ụlọ ahịa na Europe map.
Ha na-ata agwa kọfị ha na-asụgharị na ha nwere nke kacha mma.
Ọ kpọwo ihe nkiri nke kọfị. Ọ maa nwere ebe anyị kacha mma kọfị ụlọ ahịa na Europe ndepụta. Nke a ohere bụ a ememe nke kọfị omenala na nwere a akatabi okop ụlọ na a ala-nke na-art Roastery. Eche Willy Wonka osobo kọfị.
na Edinburgh, the Brew Lab is on-trend and is one of the kasị mma kọfị ụlọ ahịa na Europe.
Pụrụ iche Lab si iche iche nwere ndị mmadụ banging ụzọ ha maka ndị ọzọ. Ha kọfị menu bụ a Agba ha ahuhu.
Ọ na atụmatụ anọ n'usoro otu-mbido coffees. Abụọ e brewed na ha ime biya mmanya na ndị ọzọ na abụọ na ha espresso mmanya. Coffee ụzọ abụọ deliciously na achicha ma ọ bụ pastries, nke ime biya ụlọ nyocha nwere ọtụtụ.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “10 Best cafes N'ihi The Best Coffee Na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-cafes-europe/?lang=ig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)